Xirmooyinka Shirkadaha iyo Embossers ee Shirkadaha iyo LLCyada
Seal / Embosser Gacameedkayaga qurxoon ee wanaagsan ayaa lagu soo daray xirmooyinkayaga Shirkadaha iyo LLC. Waxay ka samaysan yihiin bir bir fudud laakiin fudud oo la adeegsan karo, shaabadaha shirkadaha sida annaga ayaa laga yaabaa inay u baahdaan gobolo badan si loo sameeyo macaamil ganacsi gaar ah.
Si aad u dalbato Seal Shirkadeed, fadlan wac waaxda adeegga macaamiisha Mon-Fri inta u dhaxaysa 6: 00AM iyo 5: 00PM Waqtiga Pacific ee:
Ama waxaad u isticmaali kartaa soo gudbinta foomka dalabkeena halkan: Dalbo Seyl Shirkadeed
Seal Corporate Standard - $ 56
Qaabkani wuxuu caan ku noqday cabbirkiisa is haysta oo buuq iyo lacag aad u sarreeya leh oo bixiya aragtiyo adag, xasilooni leh oo ku saabsan wax kasta oo waraaqo ah.
Seal desktop Corporate Seal - $ 96
Qaabkan waxaa loogu talagalay in lagu dhigo cadaadis weyn dadaal aad u yar. Waxaa si weyn loogu talinayaa aragtiyada soo-noqnoqda oo aad u tiro badan.
Seal Shirkadeed culus - $ 72
Cabbirkan culus, shaabad culus ee shirkadeed wuxuu bixiyaa awood dheeraad ah wuxuuna kuu oggolaanayaa gelinta xajmiga xajmiga weyn. Aad ayey ugu fiican yihiin dukumiintiyada waaweyn, garka weyn.
Seal Elekant Corporate - $ 96
Sharaxaad quruxsan oo si sax ah loo sameeyay, embosser desktop desktop wuxuu wax weyn ka tarayaa shirkad kasta ama xafiis ganacsi. Qalab-sameeyeyaasha desktop-ka ayaa ah bir bir ah, ka dibna gacanta lagu qurxiyo si loo abuuro meel siman, qurux badan. Waxaa lagu heli karaa dhammeystiran saliidaha la dubay, oo lasaaray dahabka loo yaqaan '24K dahab dhammeeyay' ama xitaa chrome steel.